Ambatolampy : Notolorana foibe fandanjana fiara -
AccueilRaharaham-pirenenaAmbatolampy : Notolorana foibe fandanjana fiara
Tamin’ny fomba makotrokotroka sy feno hafaliana no nandraisan’ny vahoaka tsy tambo isaina tao amin’ny distrikan’Ambatolampy, Faritra Vakinankaratra ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly.
Notoloran’ny Filoham-pirenena tamin’ny fandalovany tamin’ny mponin’Ambatolampy sy ireo mpampiasa iny Lalam-pirenena fahafito (RN7) iny mantsy ny foibe fandanjana fiara lehibe (station de pesage). Taorian’ny nanolorana ny ivon-toeram-pandanjana teny Ambohimalaza ho an’ny Lalam-pirenena RN2, nahazo ny anjarany ihany koa izany ny amin’iny RN7 iny.
Natao izany fotodrafitrasa izany mba hitandrovana sy hitahirizana hatrany ny fananam-pirenena eo amin’ny tontolon’ny lalana eto amintsika. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fetran’ny lanja tokony hoentin’ireo fiara lehibe ary indrindra hisorohana ny loza mety ho ateraky ny fihoaran-danja. Manampy izany, hitandrovana hatrany ireo tetezana amin’ireo Lalam-pirenena…
Raha ny mahakasika ity fotodrafitrasa ity indray, nohavaozina tanteraka ilay ivon-toerana teo aloha ka ny 16 febroary 2018 teo no nanombohan’ny asa. Naharitra 1 volana sy tapany kosa ny faharetan’ny fanarenana. Manaraka ny fenitra takiana amin’izany fandanjana fiara lehibe izany ity ivon-toerana ity miaraka amin’ireo fitaovana raitra sy vaovao ahafahana manara-maso ny lanjan’ny fiara rehetra mandalo eo aminy. Mahatratra hatramin’ny 1 654 995 741 Ar kosa ny teti-bidin’ny fanamboarana sy ny fitaovana rehetra miaraka aminy. Fiaraha-miasa amin’ny Banky Iraisam-pirenena no nahafahana nanangana ny fotodrafitrasa ary ny orinasa Smatp kosa no nanatanteraka ny asa.
Tetsy andaniny, mbola nahazo toeram-pamonoana omby manaraka ny fenitra takiana amin’izany ihany koa ny distrikan’Ambatolampy. Raha ny fanazavana mahakasika ny fotodrafitrasa indray, omby manodidina ny 25 sy kisoa 35 hatramin’ny 42 isan-kerinandro no hoentina vonoina ao raha latsak’izany kosa teo aloha ary ankalamanjana no namonoana ireo biby ireo.
Araka izany, mitohy hatrany ny asa fampandrosoana hoentin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina manerana ireo faritra maro eto Madagasikara.
Tafiditra anatin’ny tetikady fampandrosoana an’I Madagasika ny fiatrehana ny loza voajanahary sy loza ara-boajanahary tahaka ny rivo-doza. Isan’ny lehibe amin’izany ny fiomanana. “ Tsy maintsy miomana isika. Madagasikara dia firenena isan’ireo mizaka ny vokatr’izany loza ...Tohiny